- ‘कुनै पनि खालका असंवैधानिक कदम नेपाली कांग्रेसले सहेर बस्न सक्दैन’
‘कुनै पनि खालका असंवैधानिक कदम नेपाली कांग्रेसले सहेर बस्न सक्दैन’
विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेसका प्रखर वक्ता तथा जुझारु युवा नेता हुन् । उनी पार्टीभित्र र बाहिर पनि प्रष्ट वक्ताका रूपमा परिचित छन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, सक्रिय र रूपान्तरणको पक्षमा सधैं वकालत गर्ने युवा नेताका रूपमा उनको परिचय बनेको छ । बौद्धिक तथा निडर व्यक्तित्वका रूपमा परिचित शर्मा २०४० सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका हुन् । २०४३ सालमा मेची क्याम्पसको सभापति भएका शर्मा २०४९ सालमा कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सभापति बनेका थिए । उनी कांग्रेसको तेह्रौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका हुन् ।
। गत आम निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसद् उम्मेदवार बनेका शर्मा झिनो मतले उपविजेता बन्न पुगे । उनले सधैं नीति, नैतिकता र रूपान्तरणको पक्षमा रहने तर गुट–उपगुटमा रहन नचाहने नेताका रूपमा पनि परिचय बनाएका छन् । अहिले उनको परिचय कांग्रेसको प्रवक्ताको रूपमा थपिएको छ । कांग्रेसको कमजोर जनमत, अब कांग्रेसले संसद्मा खेल्ने भूमिका, भावी रणनीति, पार्टी पुनर्जीवनसहित अन्य विषयमा कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग नेपाल ताराका लागि सुदर्शन आचार्यले गरेको संवाद ।
अहिले काँग्रेसको कमजोर जनमत आएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको पराजयलाई कांग्रेसले विशेष पाठका रूपमा लिएको छ । पराजयको जुन कुरा छ जनताले पहिलो पार्टीका रूपमा कांग्रेसलाई निवार्चित नगरेर प्रतिपक्षको स्थान दिएका छन् हामीले त्यसलाई स्वीकारेर जानुपर्छ । पराजयका बाबजुद पनि कांग्रेसले एउटा ऐतिहासिक चरण पार गरेर आएको छ । एउटा, देशमा चलिरहेको संक्रमणकाललाई अन्त्य गरेर नयाँ चरणमा अवतरण गराएको छ । अर्को, नेपाली कांग्रेस आफैंमा पनि गौरवमय इतिहास बोकेको पार्टी हो । यसको प्रजातन्त्रका लागि लामो समय लडेको इतिहास छ । प्रजातन्त्र स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसको अहं भूमिका छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले अब आफ्नो विगतको गौरवमय इतिहासलाई जनतासामु लैजाने, आफूभित्र भएका कमीकमजोरीलाई करेक्सन गरेर जाने र विगतमा कांग्रेसले गरेका विकासका सुरुवात, प्रजातान्त्रिक अभ्यासजस्ता कुरा जनतालाई प्रष्ट पार्ने मुख्य काम गर्छ । त्यसपछि अब राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन गरिने विकासका खाका तथा रणनीतिलाई जनतासामु लैजाने काम पनि कांग्रेसले गर्छ ।
अहिलेको वाम गठबन्धनको बहुमत र उनीहरूको रणनीतिलाई कांग्रेसले कसरी फेस गर्ने योजनामा छ ?
चैत ९ गते पार्टीको कोन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक छ । त्यो बैठकमा कांंग्रेसको आफ्नै रूपान्तरणका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण पाटो छ, त्यसमा प्रवेश गर्छ । त्यसपछि संसद्मा खेल्नुपर्ने भूमिका तथा रणनीतिका बारेमा छलफल गर्छ । एक त संसदको सन्दर्भमा संसदीय दलको बैठकले छायाँ सरकारको अवधारणालाई अगाडि सार्ने निधो गरेको छ । त्यसलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्नेछ । हुन त छायाँ सरकार भन्दा आमरूपमा कतै समानान्तर सरकार हो कि भन्ने भ्रम भएजस्तो देखिन्छ । त्यस्तो होइन, नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न क्षेत्र हेर्ने समितिहरू छन् । ती समितिहरूले आ–आफ्ना क्षेत्र हेर्छन् । त्यस्तै, संसदभित्र पनि विभिन्न क्षेत्रसम्बन्धी समितिहरू छन्, तिनले सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने गर्छन् । छायाँ सरकारले पनि विभिन्न मन्त्रालयले गरेका राम्रा–नराम्रा कामलाई नजिकबाट हेर्छ । राम्रा काम गरे समर्थन गर्ने र गलत काम गरे विरोध गर्ने तथा त्यसलाई जनतासामु लैजाने राणनीतिका लागि पार्टीलाई मार्गनिर्देशन गर्नेछ । छायाँ सरकारमा पार्टीभित्र भएका सम्बन्धित विषयविज्ञ साथीहरू जानेछन् । यो सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने वा प्रतिशोध साँध्ने रणनीति हुँदैहोइन र हारको आक्रोश पनि होइन । यो त विशुद्ध प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । संसारका प्रजातान्त्रिक राष्ट्रमा यस्तो अभ्यास भएका छन् । नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको अभ्यासका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।
कांग्रेसले केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि पतिपक्षकै भूमिका पाएको छ । वाम गठबन्धन सरकार आफ्नो रणनीति लागू गर्न आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने लक्षण देखिएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा कांग्रेसको भावी रणनीति कस्तो हुनेछ ?
नेपाली कांग्रेस सातवटा प्रदेशसभा, केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सबैमा प्रतिपक्षमा छ । यी सबै संसद्मा नेपाली कांगे्रसले विशेष रचनात्मक भूमिका खेल्नेछ । उहाँहरूको कार्य आक्रामकै त म भन्दिनँ तर प्रजातन्त्रको सुयोग्यता भनेकै पराजयलाई सहर्ष स्वीकार गर्ने र आफ्ना कमजोरीलाई आफूभित्रै खोज्ने हो । अब नेपाली कांग्रेसले अहिले भएको पराजयका कारण खोज्छ र आफूभित्र भएका कमीकमजोरी खोजेर तिनलाई सुधार गर्दै अघि बढ्छ । अब कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने कुरामा कुनै कमी रहने छैन । प्रतिपक्षको भूमिका विनम्र तर बुलन्द हुन्छ । राम्रो कामको हामी सधैं समर्थन गर्नेछौं । सरकार संवैधानिक मूल्य र मान्यताविपरीत गएमा हामीले सधैं खबरदारी गर्नेछौं । विकासको नाममा राष्ट्र तथा समाजलाई दीर्घकालीन असर गर्ने काम भए सशक्त विरोध गर्नेछौं । यसको छनक राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर र सभामुख तथा उपसभामुखमा समर्थन जनाएर दिइसकेका छौं ।
आफ्नो पदको गरिमा राख्न सक्ने व्यक्तिलाई अवश्य हाम्रो समर्थन हुनेछ भने कमीकमजोरी भएका व्यक्ति आए त्यसको विरोध हुनेछ । राष्ट्रपतिको शालीनता, सुयोग्यता र पृष्ठभूमिमा कांग्रेसमा कुनै शंका छैन तर उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिको जुन भूमिका हो त्यसको पालना गर्नुभएन । संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सहमतिमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिले भने कात्तिक १ गते सरकारले उहाँसमक्ष पठाएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यदेश दुई महिना रोकेर राख्नुभयो । अर्को, माघ २६ गते तत्कालीन संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ ‘ख’ अनुसार सरकारले तीनजना राष्ट्रियसभा सदस्य सिफारिस गरेर पठाएकोमा त्यसलाई रोकी उस्तै खालको तर नयाँ सरकारले गरेका सिफारिसलाई स्वीकृति प्रदान गर्नुभयो । यो कार्यलाई हाम्रो पार्टीले राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा आफ्नो भूमिका नखेलेर पार्टीप्रभावित भएको ठहर गरेको छ । त्यसले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले हार्ने निश्चत हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पार्टीले उम्मेदवार उठायो । हामीले संवैधानिक भूमिका निवाह गर्ने क्षमतावान् र भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तित्वलाई सभामुखमा पूर्ण समर्थन गर्यौ । यसबाट हाम्रो भावी संसदमा खेल्ने भूमिका र सरकारलाई गर्ने सहयोग र विरोधलाई प्रकट गरेका हौं ।
जनतामा स्वतः हार्ने राष्ट्रपति पदमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएर रचनात्मक भूमिका खेल्दै अघि बढेको भए हुन्थ्यो भन्ने देखियो तर कांग्रेसले त्यसो गरेन, यसको अर्थ ?
यसको विषयमा मैले पहिले नै प्रष्ट पारिसकें । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेवारी दिनु भनेको संविधान विरोधी काम र आफ्नो भूमिका तटस्थ रूपमा निर्वाह नगरेको विरोधको संकेत हो । अर्को, प्रजातन्त्रमा चुनाव जित्ने–हार्नेको मात्रै कुरा रहन्न । जित्ने त हो नै तर हारेर पनि लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो । जिम्मेवार लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्ना प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित गर्न पनि हार्ने अवस्थामा समेत निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ । कांग्रेसले त्यसैलाई पालन गरेको हो । संघीय संसद् र प्रदेशको निर्वाचनअघि संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल एमाले तथा तेस्रो ठूलो दल माओवादी पार्टीले चुनावी गठबन्धन गरे । त्यसबेला कांग्रेसले हार्ने निश्चित थियो तर हामी निर्वाचनमा गयौं । हाम्रै सरकारले निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्षरूपमा सम्पन्न गरायो । कतिपयले कांग्रेसले हार्छ, हार्ने निर्वाचन गराउँदैन पनि भने । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले हार्ने–जित्ने कुरालाई महत्व नदिई निर्वाचनमा होमियो र सरकारले निर्वाचन गरायो । प्रजातन्त्र हाम्रो मूल मर्म हो, नीति हो, हामीले यसलाई अघि बढाइरहन्छौं । जित्दा पनि प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई छाड्दैन र हार्दा पनि त्यसको रक्षाका लागि दृढताका साथ उभिन्छ ।
कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, अहिलेसम्म आइपुग्दा कमजोर धरातलबाट गुज्रिँदै गएको छ भन्ने गुनासो छ । वास्तवमै यसको कारण के हो ? पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र कमजोर बन्दै गएको हो ?
नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र एकदमै कमजोर छ म भन्दिनँ र पूर्ण बलियो छ भनेर पनि म भन्दिनँ । अहिले हामीभित्र प्रशस्त कमीकमजारी रहे, अब त्यसलाई गम्भीर रूपमा सुधार गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा प्रजातान्त्रिक पार्टीको कुरा गर्दा अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्रका लागि पटकपटक संघर्ष गरेर आयो । अब कांग्रेसले आन्तरिक रूपान्तरणका लागि पनि त्यस्तै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । नेपाली कांग्रेस सात सालमा प्रजातन्त्रका लागि लड्यो, सत्र सालमा लड्यो, छत्तीस सालमा लड्यो, छ्यालीसमा लड्यो, त्रिसठ्ठीमा लड्यो भनेर पुग्दैन । यो पार्टीले केन्द्रीय समिति निर्वाचनबाट बनाएको छ भनेर पनि पुग्दैन । बीपीको सिद्धान्तमा हिंड्ने पार्टी हो त्यसैले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, कम्युनिष्टहरूलाई विश्वास गर्न सकिंदैन त्यसैले कांग्रेस पजातान्त्रिक पार्टी हो भनेर अब पुग्दैन । अब कांग्रेसले प्रजातन्त्रलाई जीवनपद्धतिमा बदल्नुपर्छ । उसले गर्ने तत्कालका निर्णयदेखि दीर्घकालीन निर्णय बहुसंख्यक नागरिकको भावनालाई प्रतिविम्बित हुने गरी गर्न सक्यो सकेन भन्ने कुराले पार्टी कत्तिको लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउँछ । कांग्रेस त्यसतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक छ र अब त्यतातर्फ लाग्छ ।
कांग्रेसभित्र युवा नेतृत्व अगाडि आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ तर त्यो कार्यरूपमा आउन सकेको छैन । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
कांग्रेसको इतिहासमा विभिन्न उमेर समूहले नेतृत्व गरेको देखिन्छ । पाका उमेरका व्यक्तित्वले मात्रै नेतृत्व गरेको भन्ने अवस्था छैन । कुनै कालखण्डमा पाका उमेरका व्यक्तित्वले पार्टीको नेतृत्व गरेको देखिन्छ भने कुनै कालखण्डमा युवा व्यक्तित्वले सरकार सञ्चालनको नेतृत्वको अवसर पाएका छन् । पार्टी स्थापना कालमा युवा बीपी कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । ०५१ को संसदीय निर्वाचनपछि पार्टीले युवा व्यक्तित्वलाई सरकार सञ्चालनको अवसर दिएको छ । जसको ५० वर्षभन्दा कम उमेर थियो । अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा ३०–३५ जना युवाहरू छौं जसलाई युवा नेताहरू भन्ने गरिन्छ । अब पार्टी नेतृत्व तहमा नयाँ नेताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अब युवा नेताहरूको नेतृत्व तहमा बढोत्तरी भएर जानेछ । यसको अति जरुरी छ । व्यक्तिगत तवरबाट पनि जरुरी छ, वैचारिक तवरबाट पनि यसको जरुरी छ । पाटीले पराजय व्यहोर्दै गर्दा स्वाभाविकै रूपमा प्रश्न उठे— पार्टी निर्वाचनमा जाँदा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी मनोनयन गरिएन, २१ महिनासम्म पनि केन्द्रीय कमिटी खाली भए । प्रदेश समितिहरू बनाउन सकेन भन्ने आलोचना भए ।
नेपाली कांग्रेसले युवालाई बेवस्था गरेको हो ?
त्यस्तो होइन । अब क्रमिक रूपमा कांग्रेसले युवालाई नेतृत्व तहमा स्थापित गर्दै लैजान्छ । पार्टीले निर्वाचन परिणामपछि युवालाई भूमिका दिन सुरु गरेर त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । युवा उमेरका कसैलाई पार्टी प्रवक्ता बनाएर त्यसको सुरुवात गरेको छ । अरू कसैलाई अन्य भूमिका दिन्छ । यसमा शंका छैन ।
पार्टीभित्र गुटगत द्वन्द्व पनि देखिन्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ?
हेर्नुस्, सिद्धान्तको कुरा गर्दा प्रजातान्त्रिक राष्ट्र त्यो हुन्छ जुन देशमा दलीय स्वतन्त्रता हुन्छ । जहाँ दलीय स्वतन्त्रता हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्रको कल्पना गर्न किंदैन । उत्तरकोरियामा लोकतन्त्र छ भन्न सकिंदैन । त्यहाँ एउटा पार्टीले एकलौटी शासन चलाइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो, यहाँ दलीय स्वतन्त्रता छ, स्वतन्त्र न्यापालिका छ । मानवअधिकार आयोग सक्रिय छ । नेपालमा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ, सम्पत्तिको अधिकार छ, वाक स्वतन्त्रता छ । त्यस्तै पार्टी पनि लोकतान्त्रिक छ कि छैन भन्ने कुरा पार्टीको आन्तरिक स्वतन्त्रता कत्तिको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । पार्टी जीवन्त छ छैन भन्ने कुरा उसभित्र फरक विचार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । व्यक्तिको पनि आन्तरिक जीवन जीवन्त छ कि छैन भन्ने कुरा फरक विचार राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । स्वाभाविक छ नेपाली कांग्रेसभित्र पनि फरक विचार राख्ने व्यक्ति तथा समूह छन् । तिनको व्यवस्थापन पनि जरुरी छ तर पार्टीभित्र बुद्धिजीवी वर्ग छ, बुद्धिजीवी भित्र पार्टीका सिद्धान्त, कार्यव्यवहार र भविष्यका बारेमा छलफल हुन्छन्, हुनैपर्छ । त्यस्तै, युवाको जमात छ, विद्यार्थी वर्ग छ ती तहमा पनि विभिन्न छलफल हुन सक्छन् । म पार्टीको प्रवक्ताका रूपमा के भन्न चाहन्छु भने त्यस्ता छलफ हुनुपर्छ र हुन दिनुपर्छ । त्यसलाई गुटगत रूपमा लिनु हुन्न । वास्तवमा कांग्रेसले क्षेत्र–क्षेत्र तथा ठाउँ–ठाउँमा भएका छलफलको निष्कर्षलाई ऊर्जाका रूपमा ग्रहण गरेर जान्छ । यसबाट सबैको व्यवस्थापन हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन यथाशीघ्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग छ नि ?
नेपाली कांग्रेसको चैत ९ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ । केन्द्रीय कार्यसमितिमा विसद् रूपमा पार्टीको समग्रताका बारेमा छलफल हुन्छ । पार्टीको पराजयको कारणका बारेमा खोजी हुन्छ र भावी रणनीतिका बारेमा पनि विस्तृत छलफ हुनेछ र एउटा टुंगोमा पु¥याइनेछ । समधानका उपायको निर्धारण पनि हुन्छ । कार्यक्रमहरू पनि बन्छन् । पार्टीको त्यो बैठकले महासमितिको बैठकको पनि निर्धारण गर्छ । केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउँछ, सातैवटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय समिति बन्छन् । त्यसपछि महासमितिमा पार्टीको समग्रताका विषयमा छलफल गरी रणनीति तयार गरेर अघि बढ्छ ।
कांग्रेसभित्र निर्वाचन पराजयका कारण आम कार्यकर्ताको मनोबल घटेको छ भनिन्छ । आम कार्यकर्ताको मनोबल बढाउने केही अचुक औषधि छ कि ?
नेपाली कांग्रेसले समग्रतामा कार्यक्रमको विशेष प्याकेज नै बनाएर अघि बढ्छ । जस्तो भूकम्प गएको क्षेत्रमा जाँदा पहिलो प्राथमिकता मानवीय उद्धार हुन्छ, त्यसपछि बस्ने, खाने व्यवस्था गरिन्छ । त्यस्तै राजनीतिक भूकम्प गएको अर्थात् पराजय व्यहोरेको पार्टीको पहिलो प्राथमिकता मनोवैज्ञानिक उद्धार हुनुपर्छ । कांग्रेसले समग्र पार्टी पंक्तिको मनोवैज्ञानिक उपचार (ट्रिटमेन्ट) गरेर अघि बढ्छ । हाम्राबीचमा अनेक विमतिहरू छन्, अनेकौं आग्रहहरू छन्, अनेक माग होलान् ती सबैलाई छलफल गर्दै जान सकिन्छ, जानुपर्छ तर प्रवक्ताको हैसियतमा देशभरका आमकार्यकर्तालाई मेरो आग्रह छ तपाईंहरूले मनोबल नगिराउनुस् । अहिलेको परिणाम पराजय मात्र होइन कि नवीन कार्य प्रारम्भ गरेर अघि बढ्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । अब पार्टी त्यतातिर लम्कन्छ । त्यसकारण मैले यसलाई नवीन ढंगले अघि बढ्ने रूपमा ग्रहण गरेर जानुपर्छ भन्छु । जान सक्छौं । मेरो भन्नुस्, हाम्रो भन्नुस्, समग्र क्षेत्रको आवाज भन्नुस् सबैलाई सँगै लिएर जानुपर्छ । पार्टी नवीन रूपमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ । फरक–फरक ठाउँबाट उठेका आवाज छन्, सबैले चाहेको रूपान्तरण हो । सबैले चाहेको कांग्रेस सक्रिय होस्, आधुनिक होस्, कार्यकुशल होस् भन्ने हो । अब त्यतातिरको यात्रा प्रारम्भ गर्नैपर्छ ।